Raha ny zava-tsikaritra ny sabotsy teo anefa dia toa tany amin’ireo mpianatry ny oniversite eny Ankatso indray, ohatra, no maha maika ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera hanaterana Arovava. Mitady hitroatra ve ny eny dia anaterana tampim-bava malaky sa inona no antony ? Manome fanampiana ho an’ny mpanao gazety ny filoham-pirenena malagasy dia ny governoram-paritra no mitsinjara izany fa tsy hita ny minisitra mpiahy; ny resaka arovava ho an'ny mpanao gazety dia ny fiadidiana ny repoblika indray no tonga aloha. Maro anefa ny mpanao gazety tena sahirana ankehitriny; Ny artista indray foana daholo ny fifanarahana rehetra kanefa izao Paska izao no tena fihinanana hatramin’izay, tsy hita tabilao ihany koa ny minisitra.